Shir lagu dhisayo baarlamanka maamulka Jubaland oo ka furmay Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ka furmay shir looga arrinsanayo dhismaha baarlamaanka maamulka KMG ah ee Jubaland.
Waxaa munaasabadda furitaanka shirka ka qeyb-galay hoggaamiyaha maamulka Juba, Axmed Madoobe, ku-xigeennadiisa, odayaasha dhaqanka, xubno ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyio wakiillo ka socday beesha caalamka.
Furitaanka shirka ayaa waxaa ka qeyb galaya mas’uuliyiin ka socota Dowlada Soomaaliya iyo wafuud caalami ah oo ka kala socda Ururada IGAD,Qaradamada Midoobay,Midowga Yurub iyo Dowlado ay ka mid tahay Mareynkanka.
Madaxweynaha maamulka Jubaland, Axmed Madoobe oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii odayaasha dhaqanka ay ugala shaqeyn lahaayeen xulista xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka Jubaland.
Axmed Madoobe ayaa beesha caalamka ka codsaday inay ka taageeraan odayaasha sidii ay ugu fududaan lahayd xulista xubnaha baarlamaanka.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Saalax ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya ka go’an tahay taageerada maamullada dalka ka dhismaya, si dalka looga hirgeliyo nidaamka federaalka.
Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay dadweynaha ku nool gobollada Jubbooyinka inay garab istaagaan maamulkooda, kalana shaqeeyaan sidii loo soo celin lahaa ammaanka, midnimada iyo dib u heshiisiinta.
Wasiirka ku-xigeenka warfaafinta maamulka Jubba Geele Max’ed Aadan oo u waramay Idaacada Risaala ayaa sheegay in muhiimada shirka ka furmay Kismaayo uu yahay sidii Baarlamaan ku yimid cadaalad loogu yagleeli lahaa Shacabka dega Jubbooyinka.
Maamulka Juba ee KMG ah ayaa waxaa aqoonsan dowladda Soomaaliya iyo beesha Caalamka, waxaase dhismihiisa ka dhinaa waxyaabo badan oo baarlamaanku ugu horreeyey.